Nkebi nke 1: Ọ Samsung color nkwado MP4?
Part 2: Gịnị m Samsung ekwentị nwere ike ghara imeghe MP4 video?
Nkebi nke 3: MP4 ọkpụkpọ ngwa n'ihi na Samsung
Nkebi nke 4: Olee otú igwu egwu MP4 on Samsung TV?
Samsung color eme na-akwado na MP4 usoro. Na ọganihu na nkà na ụzụ, ndị ọhụrụ Samsung igwe-emepụta n'okpuru Galaxy usoro bụghị nanị inye nkwado maka MP4 kamakwa maka H.264, AVI, WebM, 3GP na WMV usoro. Nke a bụ ihe mere ọrụ nwere ike ibudata na kpọọ dị iche iche dị iche iche videos si n'akụkụ nile nke internet ma nụ ụtọ ha na ha Samsung mobile igwe.
A na-enwekarị nsogbu na ọtụtụ Samsung na ekwentị mkpanaaka ọrụ nwere na ihu bụ enweghị ike nke ha na ekwentị na-egwu MP4 videos. Mgbe Samsung eze na-akwado ndị MP4 format na ya ngwaọrụ karịa mere eme ọrụ nwere na ihu nsogbu a, otu onye nwere ike ịjụ. Nke a bụ n'ihi na eziokwu na mgbe MP4 bụ a ọkọlọtọ, MP4 faịlụ nwere ike itinye na koodu iji a dịgasị iche iche nke dị iche iche codecs. Samsung akwado faịlụ Ndinam ojiji nke codecs H.263 ma ọ bụ H.264 AVC mgbe ndị ọzọ nile codecs na-adịghị akwado. N'ihi ya, ọ dị nnọọ ekwe omume na mgbe a faịlụ nwere ike ịbụ MP4, na Samsung na ekwentị mkpanaaka gaghị enwe ike-egwu ya n'ihi na eziokwu na ọ na e koodu iji codecs na Samsung anaghị akwado ugbu a.
Na ike na-egwu nile codecs na ụdị nile nke video faịlụ irrespective ha format, na RockPlayer 2 bụ oké nkume kpakpando na Android ụwa nke mgbasa ozi egwuregwu. The RockPlayer2 bụ mfe iji na flaunts kenkwukorita na elu ọrụ interface. Onye ọrụ nwere ike hazie UI na na-na naanị njikwa na ọ chọrọ na-na-ewepụ ndị ọzọ, gwakwara elu ohere na ihuenyo. RockPlayer2 na-akwado customization na ndepụta okwu na gam akporo ngwaọrụ. A-akpali nnọọ akpali mma nke dị iche RockPlayer2 si ya rivals bụ ya ike na nyefee nnukwu media faịlụ site na otu android ngwaọrụ ọzọ. Iji nke a mma gị na mkpa iji wụnye RockPlayer2 gị isi iyi na ebe android ngwaọrụ na ị ga-ọma na-aga.
Download Link bụ ebe a
MX Player bụ ihe ọzọ na oké android mgbasa ozi ọkpụkpọ na ike ga-eji na-egwu MP4 faịlụ n'agbanyeghị ihe ha nyopụta, na a Samsung ekwentị mkpanaaka. The MX ọkpụkpọ awade ma ngwaike na software nyopụta; a mma na ndị ọzọ android media Player na-enweghị. Ngwaike nzuzo na-enye ohere ọkpụkpọ ka nwere otu mmetụta na arụmọrụ na ndụ batrị ekwentị gị dị ka ndabere media ọkpụkpọ. Ọzọ dị ukwuu arụmọrụ awa site MX Player bụ ya nkwado maka otu, sọrọ na quad isi processors. Onye ọrụ interface bụ nnọọ mmekọrịta na ewepu mkpa maka Igwumi menus na ọbere nchịkọta nhọrọ. Ị nwere ike mfe ịhazie olu, na ihuenyo ìhè site swiping mkpịsị aka gị na ihuenyo na a akpan akpan direction. Ọzọkwa, ị nwere ike nsoro na mbugharị, pịgharịa ndepụta okwu niile mgbe na-anọ na playback ihuenyo.
3. VLC maka Android
Na oké playlist management na ogologo nkwado maka n'ụzọ nkịtị ụdị ọ bụla nke media faịlụ, VLC maka Android bụ a ga-enwe media ọkpụkpọ maka Samsung na ekwentị mkpanaaka ọrụ. Dị ka desktọọpụ version, ọ bụ free na mfe iji na-abịa etinyegoro na ụyọkọ nke bara uru ọrụ dị ka Chromecast mirroring nkwado na ikike na-emeghe netwọk iyi si a URL. VLC maka Android nwere ike playback nhọrọ dị ka ọdịyo equalizer, sobtaitel nkwado, a na-ehi ụra ngụ oge na ikike ịgbanwe playback ụra tinyere ikike na-awụlikwa elu na a oge kpọmkwem. Ya ike na-egwu ma ọdịyo na video na oké -ndị ekewapụ ya si ọzọ media egwuregwu. VLC maka android na-akpaghị aka ụdị nile ọdịyo na vidiyo faịlụ ugbu a na gị android ngwaọrụ n'ime ha na nwoke nchekwa N'ihi ya na-eme ka ohere ndị a faịlụ nnọọ mfe si n'ime mgbasa ozi ọkpụkpọ onwe ya. Usoro mgbasa ozi a faịlụ na-ahụ mere ndokwa na ndabere nke ha metadata, a mara mma isi ọrụ ma a nnọọ uru otu kwa.
Ugbu a na anyị maara na-agaghị emeli tinye n'ihu site ele mmadụ anya n'ihu nyopụta ikike nke Samsung ngwaọrụ na otú awagide nsogbu na Samsung color, anyị dị njikere na-a nzọụkwụ-atụ na-akpali anyị na-esote isiokwu. Samsung TV, dị ka Samsung color, bụ nnọọ ewu ewu na ngwaọrụ site na ụlọ ọrụ na ọtụtụ nde ndị ọrụ niile gburugburu ụwa. Na-egwu MP4 on Samsung TV nwekwara ike ịbụ bit nke a hassle dị ka Samsung mobile igwe. N'ihi nke a Wondershare abịa na ihe ndị magburu onwe software iji dozie gị niile nsogbu ndị na-ezere unu ghara ịbụ ike igwu egwu MP4 na gị Samsung TV. Iji nweta a knowhow nke a dị ịtụnanya software na-esi mara ya na-arụ ọrụ ka mma,-agbaso nanị ebe a.
Samsung VS iPhone: nke onye ị na-achọ mma?
Samsung Ndi ana-akpo Iweghachite - Olee otú naghachi Samsung Ndi ana-akpo
> Resource> Samsung> 4 Ihe Ndị Ị Maara banyere MP4 na Samsung